Herrega Saanduqa Qusannaa - Oromia International Bank
Namni galiin isaa xiqqoo ta’e hundi hanga saantimaatti saanduqa kana keessatti kuufachuun yeroo murtaa’e booda gara dame baankii deemee qusachuu kan dandeessisudha. Aadaa qusannoo illee ni jajjabeessa.
Maamilli gara baankii osoo hin dhufin guyyaa guyyaan harcaatuu saantimaa walitti qabachuu danda’a.
Tajaajilli kun turban lama lamaan ykn turban torbaniin ykn guyyaa guyyaan maamilli yoroo barbaadetti gara baankiitti kennuu danda’a
Saanduqni qusannoo tajaajila sa’a 24 tajaajila qarshii qusachuuf kan itti kennamu yoo ta’u baasii gochuun kan danda’amu garuu abbaan herregichaa gara damuu deemuu qofaani.
Maallaqa kuufamaa fayyadamuuf murteessaadha.